हर्क साम्पाङ- अ रेभुलुसन :: राजु अधिकारी :: Setopati
दुई ठूला दलका नेतालाई हराएर धरानको मेयर बनेका एक आममान्छे
काठमाडौं/विराटनगर, जेठ ८
भानुभक्त काठमाडौं/विराटनगर, जेठ ८
सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकामा ४७६२ मतान्तरले सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवारलाई हराएर मेयर जित्न सफल स्वतन्त्र उम्मेदवार हर्कराज राई साम्पाङ। तस्बिरः सन्जोगबाबु दाहाल
हर्क साम्पाङ अ रेभुलुसन।
फेसबुकको यो पेजलाई ९० हजारभन्दा बढी मानिसले फलो गरेका छन्। दुई वर्षदेखि हर्कराज राई उर्फ हर्क साम्पाङले यही पेजबाट धरानका विविध विषयमा आफ्ना स्ट्याटस र भिडिओ अपडेट गरिरहेका हुन्छन्। योजना सुनाइरहेका हुन्छन्। नगर चलाइरहेका दलका नेताका कारण समस्या बल्झिएको तर्क गरिरहेका हुन्छन्। अनि आफ्ना गीत र अन्य रचना पनि सुनाइरहेका हुन्छन्।
आइतबार बिहान पनि उनी यही पेजबाट लाइभ आएका थिए। आजको उनको लाइभ अरू दिनको भन्दा फरक थियो। किनकि धरानको पब्लिक स्कुलबाट आइतबार फेसबुक लाइभमा आउँदा उनी धरानका आन्दोलनकारी थिएनन्, ‘वेटिङ’ मेयर भइसकेका थिए।
आइतबार साँझ निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको अन्तिम मतपरिणामअनुसार साम्पाङ सत्ता गठबन्धन र एमालेका उम्मेदवारलाई पछि पार्दै धरानको मेयरमा चुनिएका छन्।
दलहरूको दबादबा उल्ट्याउँदै उपमहानगरका मेयरको आसनमा पुगेका साम्पाङले यो उपलब्धिसम्मको यात्रामा दुःखका थुप्रै कान्ला उक्लेका छन्। स्थानीयबासीका मसिना तर महत्वपूर्ण मुद्दामा निरन्तर काम गरेका छन्। स्थानीय मुद्दा र तिनै मुद्दामा निरन्तर काम गरिरहेकै बलमा उनले चुनाव जितेका हुन्।
उनी मेयर बनेपछि फेसबुक पेजको नामजस्तै साम्पाङले धरानमा एउटा क्रान्ति पूरा गरेका छन्। जुन क्रान्ति उनले एक्लै सुरू गरेर वर्षौंसम्म एक्लै चलाएका थिए।
धरानेका दैनिक जनजीवनसँग जोडिएका सवाल उठाएर साम्पाङले ‘क्रान्ति’ थालेको १० वर्षअघि हो।
धरान सहरको दायाँबायाँ बग्छन् सर्दु र सेउती खोला। उपमहानगर बनेपछि सर्दुपारिको विष्णुपादुका र सेउतीपारिको पानमारा पनि धरानमै मिसिएका छन्।
दायाँबायाँ दुई खोला बग्ने भए पनि धरानवासीले किचनदेखि बाथरूमसम्म भनेजति पानी पाउँदैनन्। लाहुरेहरूको सहर भनिने धरानको पानीको तिर्खा पूरा नभएको वर्षौं भइसक्यो। कयौंपटक यो कुरा चुनावी एजेन्डा बनिसक्यो।
खानेपानी समस्यालाई साम्पाङले चुनाव लड्नुभन्दा धेरै पहिलेदेखि एजेन्डा बनाएका थिए। खानेपानी समस्या समाधान गर्न उपमहानगरले लिएका नीति गलत भएको भन्दै विरोध गरेका थिए।
खानेपानी मात्र होइन, धरानको बाटोघाटो, बिजुलीजस्ता आधारभूत समस्याबारे साम्पाङले वकालतसँगै दिनरात खटिएर अभियान नै चलाए। धरानको वैभव बनेको बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा मौलाएको बेथितिविरूद्ध उनले जवाफदेही निकायलाई तीखो भाषामा प्रश्न गर्दै आए। हरेक सार्वजनिक सेवाको स्तर सुधारका लागि दबाब दिए।
धरानमा भ्रष्टाचारविरूद्ध अभियान चलाउने पूर्व नगर उपप्रमुख कृष्णनारायण पालिखेको अभियानमा सहभागी भएका उनी पालिखेको निधनपछि आफैं अगुवा भए।
२०७२ सालमा धनकुटा रोड विस्तार गर्दा धेरै जनाको उठिबास लाग्ने भएपछि साम्पाङसहितका आन्दोलनकारीले अभियान चलाए। त्यही आन्दोलनले उनलाई धरानमा चिनाएको स्थानीय बताउँछन्।
‘जनतालाई मर्का पर्ने कुरामा उहाँ सधैं विरोधमा ओर्लिनुहुन्छ, त्यसका लागि एक्लै लड्नु किन नपरोस्,’ साम्पाङलाई लामो समयदेखि साथ दिँदै आएका समिर तामाङ भन्छन्, ‘जनताकै आवाज उठाउँदा उहाँलाई पटक-पटक प्रहरीले थुनेको छ। कुटेको छ। तर डराउने र थाक्ने स्वभाव उहाँको छैन।’
‘यी सबै कुरा हुँदा पनि उहाँले अभियान छाड्नुभएन,’ समिरले थपे।
आन्दोलनको भाषा बोलिरहेका साम्पाङलाई साढे दुई वर्षअघि लाग्यो- सधैं सडकमा बसेर मात्र समस्या समाधान हुँदैन। समाधान गर्ने ठाउँमा आफैं पुग्नुपर्छ।
साम्पाङ फेरि सडकमै फर्किए। हाते माइक बोकेर भाषण गर्न थाले। त्यति बेला पनि उनी एक्लै थिए।
उनको एक्लो यात्रा वैशाख ३० को चुनावअघिसम्म जारी थियो।
अरू उम्मेदवारको घरदैलो अभियानमा हजारौंको लर्को लाग्थ्यो। साम्पाङ भने थोरै साथीहरूसँग चोकचोकमा भाषण गर्दै हिँड्थे।
दलका उम्मेदवारको भाषण सुन्न धरानभरिबाट गाडीमा मान्छे ओसारिन्थे। साम्पाङको भाषण सुन्न न स्रोता हुन्थे न ताली ठोक्न समर्थक। स्रोताविहीन चोकमा एक्लै उभिएर उनी आफ्ना कुरा राखिरहन्थे।
स्थानीय निर्वाचनको माहोल सुरू भएपछि मौन अवधिको अघिल्लो दिनसम्म धरानमा देखिने दृश्य यही र यस्तै थियो।
मतगणनाको तेस्रो दिन पूरा भएपछि भने दलहरूको त्यो तामझामलाई धराने मतदाताले नपत्याएको संकेत आउँदै थियो। जब चौथो दिनको गणना सुरू भयो, हर्कले दलका सबै उम्मेदवारलाई पछाडि पारिदिए।
त्यसपछि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा धेरैले लेखे, ‘हर्कको भाषण सुन्न पनि नआएका धरानेले भोट जति सबै उसैलाई खन्याइदिएछन्।’
कांग्रेस, एमाले, माओवादी लगायत ठूला दलका नेता-कार्यकर्ताहरूले साम्पाङलाई ‘हल्का खुस्केको’ भनेर सधैं बेवास्ता गर्दै आएका थिए। चुनावमै पनि सबैजसो दलले ‘एक-दुई हजार भोट काट्ने’ आकलन गरेका थिए।
‘दलका मान्छेको नजरमा उहाँ खुस्केकै हो नि,’ धरान-९ का ४६ वर्षीय राजेश शर्मा भन्छन्, ‘उहाँ हरेक क्षण जनताकै समस्याका लागि दस वर्षदेखि लागेको लाग्यै हुनुहुन्छ। पार्टीका मान्छे चुनाव आउँदा मात्रै जनता सम्झिन्छन्। उहाँ दिनरात जनताको घरदैलोमा पुग्नुहुन्छ। यस्तो मान्छे देखेपछि दलहरूले खुस्केको भन्नु कुन नौलो हो र? तर यसपटक उहाँ र धराने जनता मिलेर दलहरूको हावा खुस्काइदिएको चाहिँ हो।’
कुनै बेला एमालेले आफ्नो किल्ला ठान्ने धरानमा यसपटक एमाले तेस्रो भयो। २०७६ मा पहिलोपटक एमाले किल्ला तोडेकोमा खुसी भएको कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा र एकीकृत समाजवादी साझा उम्मेदवारसहित चुनावी मैदानमा थिए। त्यही गठबन्धन पनि ठूलै मतान्तरले दोस्रो मात्रै भयो।
यसपालि स्थानीय चुनावमा धरानका साम्पाङ मात्र होइन, स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका धनगढीका गोपाल हमाल र काठमाडौंका बालेन शाहलाई पनि जनताले पत्याएका छन्। दलका नेताहरूको दाँजोमा यी स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई नै नगर प्रमुख बन्न योग्य ठानेका छन्। तर हमाल र शाहभन्दा साम्पाङ यस कारण भिन्न छन्, किनभने अघिल्ला दुई जना आ-आफ्नो क्षेत्रमा नाम कमाएका अनुहार हुन्। हमाल लोकप्रिय व्यवसायी हुन् भने शाह परिचित र्‍याप गायक हुन्। साम्पाङ भने सबै हिसाबले आममान्छे हुन्।
२०३९ सालमा खोटाङमा जन्मिएका हर्क साम्पाङ अहिले धरान-१८ बुद्धचोकमा बस्छन्। लाहुरेका छोरा उनले धरानकै महेन्द्र क्याम्पसबाट स्नातक तहसम्मको अध्ययन पूरा गरेका छन्। कुनै बेला धरानमा ट्युसन पढाउने र कम्प्युटर सिकाउने साम्पाङले वैदेशिक रोजगारका सिलसिला झन्डै ६ वर्ष इराक र अफगानिस्तानमा बिताए।
उनी झट्ट सुन्दा ‘इमोसनल’ लाग्छन्। जनतासँग सधैं नम्र भएर नहाँसी नबोल्ने उनी जवाफदेही निकायका जिम्मेवार व्यक्तिहरूसँग भने सधैं खरो रूपमा प्रस्तुत हुन्छन्। उनको यही स्वभाव र शैलीलाई स्थानीय मतदाताले विश्वास गरेका छन्। धेरै नवयुवा उनीबाट प्रभावित छन्।
‘आफूलाई सिद्धान्तनिष्ठ कम्युनिस्ट भन्नेहरू जनतालाई नमस्कारसम्म फर्काउँदैनन्। शक्तिमा भएकाहरूसँग ज्यू लगाएर बोल्छन्,’ धरान ४ का अनमोल राई भन्छन्, ‘उहाँ जनतासँग सधैं मीठो बोल्नुहुन्छ। समस्या मज्जाले सुन्नुहुन्छ। समाधानका लागि भिडेको भिड्यै गर्नुहुन्छ। हामीले खोजेको मेयर यस्तै हो।’
दस वर्षदेखि एक्लै धरानको सडकमा कराइरहेका साम्पाङको आवाजमा वैशाख ३० गते धरानवासीले आफ्नो आवाज मिसाएका छन्। वर्षौंदेखि आफ्नो कुराका लागि सडकमा बोलिरहेको मान्छेलाई यसपालि धरानेले मेयर बनाउने छन् भन्ने छनक चुनावअघि नै देखिएको थियो।
स्थानीय चुनावको एक साताअघि सेतोपाटीले धरान उपमहानगरका २० वटै वडाका विभिन्न टोल पुगेर करिब सय जना मतदातासँग कुराकानी गर्दा ४० वर्षीय साम्पाङप्रति अभूतपूर्व आकर्षण देखिएको थियो। त्यस बेला हामीले कुरा गरेकामध्ये झन्डै ३६ प्रतिशत मतदाताले यसपालि साम्पाङलाई मत दिने बताएका थिए।
मतदाताहरूसँगको भेटघाटपछि हामीले लेखेका थियौं- ‘साम्पाङप्रति अहिले देखिएको आकर्षण चुनाव हुने दिनसम्म कायम रहेमा धरानले यसपालि ‘दोस्रो सरप्राइज’ दिनेछ। साढे दुई वर्षअघि सदाबहार वामपन्थी किल्ला तोडेर सरप्राइज दिएको धरानले यसपालि कांग्रेस-एमालेजस्ता प्रमुख दललाई हराउँदै स्वतन्त्र उम्मेदवार साम्पाङलाई जिताएर अर्को सरप्राइज दिन सक्नेछ। सापाङले चुनाव जितेनन् भने पनि उनले यति धेरै मत ल्याउने छन्, त्यो धरानवासी र बाहिरका लागि सरप्राइज नै हुनेछ।’
अन्ततः सबैलाई सरप्राइज दिँदै चुनाव जितेका साम्पाङ अब प्रश्न सोधिरहने भूमिकाबाट उत्तर दिइराख्नुपर्ने आसनमा पुगेका छन्। नागरिकको सूचनाको हकका लागि समेत निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका उनी अब कसरी अघि बढ्छन्? यो विषयलाई धरानमा धेरैले चासोका साथ हेरेका छन्।
धरानको मेयर चुनिएपछि सबभन्दा पहिले खानेपानी समस्या सुल्झाउन इमानदार पहल थाल्ने उनले बताएका छन्।
अहिले पनि धरान सहरमा खानेपानीको दैनिक माग अढाई करोड लिटर हाराहारी छ। दैनिक ५० देखि ६० लाख लिटर मात्र खानेपानी आपूर्ति हुने अवस्था छ। यो अवस्था दलहरूको मनपरीले ल्याएको ठहर उनको छ।
‘यहाँ दलहरूबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि एसीवाला कोठामा बसेर, एसीवाला गाडीमै हिँडेपछि जनताको समस्या भुल्छन्,’ हर्क भन्छन्, ‘म सबभन्दा प्राथमिक रूपमा धरानको खानेपानी समस्या समाधान गर्न लाग्नेछु।’
अहिले स्थानीय चुनावका धेरै जनप्रतिनिधि आफूले तलबभत्ता नबुझ्ने घोषणा गरिरहेका छन्।
साम्पाङ भने तलबभत्ता बुझ्ने बताएका छन्। ‘तलबभत्ता बुझ्छु, लिनैपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर त्यसभन्दा बाहिरको एक रूपैयाँ पनि मैले खाएको प्रमाणित भए जस्तोसुकै सजाय भोग्न तयार हुनेछु।’
उनले धरानको पर्यावरण जोगाउने, प्राकृतिक स्रोत दोहन रोक्ने, फोहर नियन्त्रण गर्ने योजनामा पनि ध्यान दिने बताएका छन्।
चुनाव जित्दै गर्दा उनी निकै विनयी भाकामा पेस भइरहेका छन्।
‘जुनसुकै दलबाट निर्वाचित भएर आएको भए पनि उसको ध्येय धरान राम्रो बनाउने हो,’ उनले भने, ‘राम्रो धरान बनाउन म सबैसँग हातेमालो गरेर अघि बढ्नेछु।’
आफू मेयर रहुन्जेल कुनै पनि धरानवासीको उठिबास नलगाउने उनले प्रण गरेका छन्।
‘विकास मान्छेका लागि हो भने सबभन्दा पहिला मान्छेलाई बाँच्न दिनुपर्छ भनेर त्यो आन्दोलन चलेको थियो,’ साम्पाङले भने, ‘म मेयर हुञ्जेल कम्तीमा जनताको उठिबास लगाउने काम गर्दिनँ। पहिलो कुरा जनताले बाँच्न पाउनुपर्छ। तिनै जनतालाई रूवाएर गरिने विकास अर्थहीन हुन्छ।’
प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ ८, २०७९, ०९:००:००